UUR DOOX: Mashruuca Islamiga ee Soomaaliya
Thursday December 15, 2011 - 23:34:20
Allaa mahad leh, ammaan oo idilna Ilaah ayaa iska leh, qofkuu hanuuniyo ayaa hanuunsan, ninkuu lumiyana wax hanuunin karaa ma jiraan.
Taxanahan oo aan u bixiyay UUR DOOX waa mid aan uga hadli doono (hadduu Alle idmo) Mashruuca Islamiga ee Soomaaliya oo nin waliba wadaantiisa u ritay oo sheeganayo in uu isagu leeyahay; mashruucan ciddii shegatana ay sheegad tahay, ninkii ka hadlana uu gaalnimo ku xukumanyahay, kadibna dil aan naxariis laheeyn oo ay fulinayaan rag aan amar diidin wixii la farayana fuliya, iyagoo Ilaah ugu dhawaanaya dilka culimada iyo hogaankii mashruuca Islaamiga ee Soomaaliya iyo dadkii bud dhiga u ahaa sida; Sheikh Dr. Axmed Xaji Cabdiraxman Allaah jannadiisa ha ka waraabiyee.
Dilka Sheikh Axmed wuxuu leeyahay tusmooyin aad u badan oo ay kamid tahay kalago’a ku dhacay mashruucii Islaamiga ahaa iyo dadkiisii, iyo afgambiga dhiigga ku daatay ee ku dhacay dacwadii iyo dadkeeda. Waxaan aaminsanahay meelkasta ha lala aadee ninka dilay Sheikh Axmed X.cabdiraxman in uu ahaa nin u dilay manhaj uu aaminsanaa, qabiilkuu doona ha u dhashee, sababab kastana ha loo sheegee. Marin habaabinta waa ka qayb qaadasho dilka dulmiga ah sida sagaalkii mujrimiinta ahaa ee u tashaday Nabi Saalax oo yidhi sida Allah noo sheegay: waxaan miraynaa isaga iyo reerkiisa habeennimo waxaanan dhihi doonnaa ma arag meeshii ku halaagsamay. Allaah wuxuu ku tilmaamay shirqoolkii ugu xumaa ,Wuxuu Allah yidhi “anna waa shirqoolay fiiriya sidaan u burburiyay.” Dhiigga sh.Axmed meel cidla ah dhici maayo insha Allaah .
Waxaa la yiri ninkii la dhihi jiray Xajaaj ibnu Yusuf oo ku caan baxay in uu dadka cabsi galiyo oo dilo qofkii hadal ku soo celiya, ilaa uu ku yiri khudbadiisii u horreeysay markuu xilka qabtay: ”wallaahi ninkaan iraahdo iriddaa ka bax oo tan ku dhaggan ka baxo waa dilayaa” dad badan oo ah culimadii joogtay waqtigaana laayey ilaa wax hadlo la waayey balad iyo baadiyaba. Waxay noqotay in uu qof waliba is barbardhigo dhiigiisa oo la daadiyo iyo in uu aamuso. Waxaa la yidhi Xajaaj ayaa wuxuu u aaday ugaarsi (dalxiis) baadiyaha, markaasuu la kulmay nin caaqil ah oo kamid ah odaayaashii baaddiyaha, markaasuu la sheekeeystay, wareeysigii ayuu kusoo daray bal kawaran Xajaaj binu Yuusuf Athaqafi? markaasuu yidhi nacalad alla ha ku ridee dadkii waa dhameeyay, illaahay ha na dhaafiyo, culimadii oo dhan waa dhameeyay, wax soohadhay dadkii fiicnaa ma jiraan, waa daalim Allaah ayaa nagu salliday. Markuu hadalkii dhameeystay ayuu ku yidhi.
Waxaa indhaha lagu soo kala qaaday iyadoo Masaajidda inta ku tukanaysa uu afartan jir u yaryahay, nin tacliin dhigtana uu wax diin ah ku shaqo lahayn, haddii saan saan keeda lagu arkana lagu cambaareeyo, si uu isaga fogeeyo. Waxaan xusuustaa Iskuulka markii aan damcay in la I geeyo aabahay oo kamid ahaa culimmadii waaweeyneeyd oo xer badan wax baraayay, wuxuu I yidhi ilmo aan dhalay Iskuul ma geeynayo aabo Iskuul ma ahee waa” Isqool”. Waxay ahayd runtiis maxaayeelay wuxuu arkayey ilmihii loo diray wadamada yurub iyo maraykanka oo soo noqday iyagoo aan diin lahayn oo xambaarsan risaaladda gaaleeysiinta oo raba dadka in laga xoreeyo diinta. Si kastaba ha noqotee adeerkay ayaa Iskuulkii I geeyay dugsiga hoose ee Buundaweeyn ee magaalada Balled-Wayne, oo uu dhisay Talyaaniga walina wax lagu barto. Waxaa wax lagu baranjiray fasalka afraad iyo wixii ka korreeya Af-Talyaani wixii ka hooseeyana Af-Carabi. Inta aan ku maqanahay Iskuulka ma ahee inta kale waxaan kamid ahay xerta aabahay raxmaddii janno alla hasiiyee. Iskuulka inta aan dhiganaynay waxaa magacayga ka xoogbadiyey “wadaad” oo markaa ninka la yidhaahdo uu ka xishoonjiray in loogu yeero. Waxa wadaad loo leeyahay waxaa loo sheegayaa in aanay haboonayn isagoo waxbarasho ku jiro in ay ka muuqato astaan diimeed sida salaadda, maanta halkaas ha noo joogo maqaalkan ararta ah.
Barnaamijka Todobaadkii Tagay Iyo Soomaaliya Dhagayso